ILLINTII QARSOONEYD. Q:4AAD
Dhagax yar oo meesha yaalay intuu ku fariistay, ayuu la soo baxay burkii yaraa ee qandiga ugu jirey, biyihii buraashadda ku jireyna dhawr jeer cantuugay.
Boqran sidii ayey u qatan tahay, gaajo ayey naf la tahay.
Markii uu dhammaystay ayuu ku yiri “soo baxa adoonyahay aan edebta lahayn oo aniga iga matagaysa”.
Wax xoogaa ah markii ay socdeen oo ammintuna ay duhurkii ku dhow dahay, waxay aragtay niman tira badan oo hoos fadhiya balbalo qoryo laga dhisay maryo dhammaad ahna dusha looga daboolay. Nimanku hub ayey haystaan, gaari nooca dagaalka ah wuu agyaal.
Shaah iyo cunto mesha ayey ku karsadeen sigaarna waa cabbayaan.
Salaan ayaa la is weydaarsaday, wuxuu weydiiyey in Cali joogo iyo in kale? Waxay u sheegeen in uu gudaha ku jiro.
Boqran oo gaajada haysa in ay istaagga ka dhacdo ku dhow, mid dhallinyaraa ayaa gartay in ay gaajaysan tahay. ‘Yaa Kamaal khubuskaan ma siiyaa adoontaan kula socota?’ ayuu weydiiyey isaga oo ku ixtiraamaya ninka wata dooneyninna in uu u gacan dhaafo.
Kamaal wuxu ku yiri "wey taqaan luuqadda carabigee weydii hadday rabto"
Boqran intii aan la weydiin ayey la soo boodey “waan gaajoonayaa, haddad i siiso waan kaaga mahadcelinayaa”
Wiilkii dhallinyarta ahaa, wuxuu siiyey ceesh iyo digir maraq laga kariyey, koob shaah ahna wuu ugu daray.
Boqran waxay la noqotay cuntadii macaankeeda mid wax ay ku tilmaato aysan garan karin, haddii la weydiin lahaa malaha Jannada ayaa laga keenay waa oran lahayd.
Markii ay dhamaysatay ayuu ku yiri “soo dhaqaaq, waa in aan Cali u tagnaaye”.
Meesha nimanka joogey waxay ahaayeen waardiyeyaashii xerada maafiyada.
Xeradu meesha xoogaa ayey u sii jirtaa oo iskuma dhawa. Ragga illaallada ah kuligood waa hubaysnaayeen taleefanno ayey haysteen.
Xoogaa markii ay socdeen ayey soo galeen xaruntii.
Boqran, waxay isheeda la heshay Gurxan oo ka mid ahaa dhallinyartii ay isla soo koreen, isla soo tacabireen oo diif iyo saxariir adduun ay ka muuqato. Nasiibkeeda iyadu isma aragto, waa Alle mahadiis. Waxay ka murraardilaacday muuqaalka Gurxan! Allow iyada may isaragto. War iyo wacaal uma aysan heynin, meel ay ku kala lumeen iyo waxa ku dhacay kooxdeedii ay isla soo tahriibeen. Mar qura ayey ku boodey oo ku dhegtay. Waxay ku qaylisey
“Meeye dadkii, ma nool yihiin?
Maxaa nagu dhacay?
Xaggee joogaan kuwii kale?” Intaas markii ay weydiisey ayey waxay dareentay in wiilku uusan hadli karin oo kaliya uu indhaha ka mirigmirig siinayo.
Boqran oohin ayey afka furatay oo wiilkii gilgishay “Gurxan Gurxan maxaa kugu dhacay!?
Adigan ma ku kufsadeen?” ayey ku barooratay.
Labadeedii gacmood ayey ka buuxsatey garankii garbagoyska ahaa ee uu qabay oo ku gigishay. “Gurxan aboowe hadal maxad u hadli la’a dahay carabkii miyey kaa jareen oo ma hadli kartid, waan garanayaa waa sidaas!”
Boqran inta ay hadleyso ilmadu waxay qoysey labadeeda dhaban.
Waxay la dawaqsan tahay kufsigii uu u geystay Kamaal saacado yar uun ka hor. Markii ay aragtay calool xumada iyo saxariirta ka muuqata Gurxan dhibkeedii oo dhan ayey ilowday.
Kamaal ma naxo jiir damqada kuma yaal, gabadhii miskiinta ahayd inta jeegada baadkii qoriga xoog ooga fujiyey ayuu ku sii qadaanqadiyey dhankii uu joogay laadarkii weynaa ee Cali.
Cali waa nin hilboon oo caloolweyn. Afka waxaa ugu jira qoriga daloola ee buuriga lagu cabo. Wuxuu xiran yahay garan yar oo gacmagaab ah. Waxaa ag fadhiya naag qurux badan.
Marwaxad weyn oo hawada si xoog badan u tuuraysa ayaa ag taal. Qaboojiye yar iyo taleefashin xoogaa duq ah waa dhinacyaal. Qolku waa qol weyn, dhinac fadhi qaaci ah ayaa u yaal, dhanka kale sariir laba qof ah. Irrida qolka laga soo galo waxaa taagan dhowr qof oo baaraya cidda soo gelaysa iyada oo awalba albaabka hore lagu soo baaray. Waaba dowlad yar oo uu Cali xukumo.
Waxay ku wada hadleen af aysan wax ka fahmin, madax in uu ruxayo wey u jeedaa.
Cali labada gacmood ayuu kor u qaaday oo hamaansina ku daray.
Taleefankii ag yaalay ayuu soo qabsaday wuxuu garaacay nambar.
‘Haloow yaa Seydii’ ayuu ku billaabay hadalkiisii.
Qaddar xoogaa ah markii uu hadlay ayuu gacanta ugu baaqay Cali si uu u geeyo qolyaha qaabilsan in ay ku xareeyaan xerada adoonta.
Malaha Cali waa laga sii sareeyaa oo ammarka wuxuu ka qaadtaa Magefe.
Boqran ogaatay in ninka loo waday uusan Magafe ahayn se uu yahay gacanyare yaashii Magafe.
Inta loo sii waday meesha dumarka joogaan ayey jidka ku aratay dad badan oo African ah oo siyaabo kala duduwan loo ciqaabayo.
Qaarkood lugaha iyo gacmaha waxaa ooga xirnaa silsilado waa weyn oo aysna qaadi karin. Isha waxay la heshay wiil Soomaali ah oo macluusha ka muuqato feerihiisii ay bannaanka u soo baxeen, isagu silsilad kuma xirna oo maahan qof socon kara, ma awooddo in uu iska qaado duqsiga wajigiisa saaran taag la’aanta haysa darteed. Jirkiisa waxaa ka muuqda nabro waaweyn jirdil loo gaystay awgeed.
Waxaa lagu wareejiyey ninkii xerada sargaalka ka ahaa. Kamaal intii uusan qaadan lagactii uu ku gatay, ninkii ayaa weydiiyey su’aal aysan si fiican ka maqal, waxay se dareentay in iyada laga hadlayo, feejignaanteedii oo dhan dhagaha ayey is kugu geysey.
Kamaal wuxuu leeyahay “aniga ayaa ugu horeeyey waa gabar la hubo” qaab uu ku muujinayo siduu ula dhacay gabarnimadeeda ayuu u sharraxayaa qosol iyo qanacsannaan ayuu ku muujiyey.
Boqran, wey hubtaa in kufsigu sii socon doono ilaa inta Ilaahay meel kale faraj uga furi doonno.
Posted by Nimco Noor at 03:20 No comments:
ILLINTII QARSOONAYD Q:3AAD
Boqran intii aysan ka soo ambabixin dalkii hooyo waxa ay soo xansan jirtay hadba waxay is leedahay ka ma maarmidoontid. Suuqa ayey war ka raadin jirtay, si ay uga sii gaashaamato dhib iyo qatar kasta oo ku imaan karta caafimadkeeda.
Daah kama saarnayn in la kufsan doono, warka wey qabtaa in meesha rafaad kaga horrey. Maalmihii ay soo baxaysey waxay tabaabusho u gashay sidii ay is kugu diyaarin lahayd tabaalaha ay mudandoonto.
Xalku waa qabri iyo qofkii loowaday la ma kala qariyo.
Waa naf farxaddii nolosha ka quusatay. Waxay tagtay xarunta hooyada iyo dhallaanka, iyada oo u sheegeysa in ay nin guursatay,ayna tahay ardayad jaamacadda dhigata si waxbarashada aysan ooga harin waxay ka codsatay in lagu caawiyo dawooyin tayo fiicanleh oo ay kaga hortagto uurka.
Dhanka kale, waxay xoogaa lacag ah siisay kalkaalisooyinka dawooyinka u qaybisa bukaan-socodka qaba xanuunka AIDS ka.
Kalkaalisooyinku wey ka warqabaan in gabdhaha tahriibaya ay u baahan yihiin ka hortaga xanuunkaas dilaaga ah iyo bacaha galmada, iyaguna xoogaagooda lacagtaa ayey ka qaataan.
Boqran, waxay markiiba soo qabatay kiniinkii ka hortagga uurka, waxay ku xijisey kii ka hortagga AIDS ka, waxaa bacda ku jira cinjirka galmada oo ay wadatay iyo dhowr baakad oo antibiotic ah, laba baakad oo xummadjabin ah.
Waxay u kala sheegtay waxa ay yihiin, waxayna ugu hormarsiisey kii AIDS-KA iyada oo is leh ku cabsigeli.
Habartu waa mid imtixaan ah, waxay garatay baakaddii xanuun baabi’iyaha Paracetamoli.
Daf ayey ka siiyey oo ku tiri
“kan aad baan u jeclahay ayaantii iliga kore iga dhacay oo kaarka badan i hayey, haddan kaniinkaan haysan lahayn maba noolaadeen. Boqran waxay ku noqotay filanwaa! Hoosta ayey ka habaaraysaa bellaayo kugu dhacday oo weyba taqaan! Calooshu ku wareegatay maxay dad dhacday oo musaafur jidka u gashay, waaba qaadacul dariiqii la sheegi jiray.
Duqdii, inta ka faramaroojisey bacdii dawooyinka ku jiren oo dhan ayey soo bixisay cinjirkii galmada iyo dawadii ka horgaya uurka iyo tii AIDS ka.
Boqran waxay isku dayday in midda antibiotic ka ceshato, oo ku tiri “waxaan qabaa QAAXO (TB) kiniinkan waa ii muhiim ee fadlan isii!"
Habartii inta mashxaraday ayey tiri “Yaa Kamaal Nasri baa Ilaahey kuu soo diray, kaalay kiniinkii aad u baahnayd ayaa gurigaaga kuugu yimid”
Kamaal inta qoslay oo farxay ayuu ku yiri “hooyo ku jecliyaa maxaad baratay sida loola dhaaqmo adoonta dalkeena jidka ka dhigatay oo sharci darrada ku soo galaya dhulkeenna”
Boqran waxay xusuusatay calyadii qurmuunayd.
“Ba’ay illayn waxay candhuuftiisii la ureysey waa wax QAAXO (tiibijo) qaba!” ayey Af-Soomaali ku barooratay!
Habartii ayaa ku tiri “naayaa maxaad ku hadashay, hadda ii sheeg waxaad tiri?”
Boqran "wax kale maan oran ee Allaah ayaan baryaayey in xanuunka uusan igu xummaan maaddaam aad dawadii iga qaadatay."
Boqran waxaa u billowday safarkii, walwalka hayaa waa sahay la’aanta safarka inta uu qaadan doono aysan ogayn. Kamaal xoogaa yar oo biyo ah ayaa buraashadda ugu jira, burkiina cad roon ayuu qandigiisii ku sii ritay.
Boqran dhaqaajisey. Qorraxdu waa kulayl balse wax badan kama duwanna tii ay ka timid, aroor horena waa sii jarmaadeen.
In xoogaa ah markii ay socdeen ku dhawaad saacad, ayuu ku leexiyey dhisme laga guuray oo dunsan dushan ka qaawan oo wax saqaf ah aan lahayn. Wuxuu weydiiyey in ay xoogaa nasanayso?
Boqran waxay ugu jawaabtay “socod dheer miyaa inoo haray?” “Maya” ayuu yiri
“Mahadsanid, waan socon karaa” ayey ku tiri iyada oo is leh bellaayo doqosh kula gashay!
Allow mar igee meesha kuwa ii eg ay joogan ee uu sheegayey.
Kamaal ujeedkiisu waa in uu kufsado. Wuxuu u caddeeyey in uu isaga dan ka leeyahay doonayanna in uu ku xaajo guto. Qorigii ayuu xabbad is raacsaday si ay ugu quusato haddii ay isku daydo in ay dagaallanto in uu nafta ka jaridoono “halkaan soo gal’’ ayuu ku yiri.
Boqran raali waxay ku tahay in uusan dhib kale u geysan, kaliya uu xaajadiisa guto. Waxay tiri “waan ku ogolahay Kamaalow, laakiin waxaan kaa baryayaa in aad gashato cinjirka maaddama aan anigu qabo xanuunka AIDS-ka hooyadaana dawdii iga qaadatay. Ma doonayo in aan ku qaadsiiyo”
Kamaal wuxuu u sheegay in uu dumar badan oo Somaali, Itoobiyaan, Eritareyaan iyo Suudanba uu la xaajooday, aysanna ku cusubayn waxaan ay sheegeyso.
Boqran wadnahaa fug yiri “Ilaahayow maxaa i soo watay!” ayey ku ooysey.
Hilfihii uu watay intii uu iska kala siibayey ayey indhah la raacday hareereheeda, ma taqaan meeshii ay ka timid iyo meeshey u socoto midna waa meel aan jid iyo jiho lahayn. Waa dhul abaar ah oo biyo iyo baad midna lagu arag waa qarfe geed kaama xageeya ah.
"Allow dalkaygii joogi lahaayaa!"
Kamaal dhar dhigay, wuxuu sugayaa waa iyada
“Yaa xawayaana maxaad sugeysaa kaalay oo si fiican ii qanci” ayuu ku amray
Boqran si kasta oo ay u ogeyd in la kufsan doono haddan naftu siin weysey Kamaal qurmuune iyo qaxadiisa. Barteedii ayey sidii qof meesha ku qalashay u lignayd.
Markii uu dhawr jeer la hadlay, ayuu inta xaggeedii u soo dhaqaaqay qorigiina gacanta ku soo qabsaday dharbaaxo indha gooyey oo ku yiri “YAA QAXBA, maxaad waqtiga nooga dhuminaysaa”
Horeyna inta u sii qadaanqadiyey oo madaxa qabtay ayuu hilf ku siiyey dhulkii gawaanka ahaa qamiis xun oo uu xirnaa inta qor u faytay ayuu gabdhii halkii ku jaqiiqsaday.
Markii uu xaajadiisii gutay ayuu inta is iloobay dhunkaday oo yiri “yaa xilwa waxaad tahay gabar nin aniga iga horeeya kuma aragto.
Boqran, inta dhinac u tuurtay oo gawaankii hubuq ku siiyey ayey matag afka goosatay, wiswiskii iyo urkii wixii darnaa ee uu ku falay.
Kamaal markuu arkay in ay matagtay ayuu caro meeshii ugu dambeysay gaaray oo dharbaaxo ku waalay, marna qorigii baadkiisii la dhacay si arxan darro ah.
Waxay ahayd uurkutaalo aan waligeed ka harayn. Waxay kala garan la’a dahay in ay nooshahay iyo in ay dhimatay, ma dhabbaa mise waa dhallanteed waxa kugu dhacay, ma runbaa mise waan ku riyoonayaa! Boqran waxay u qaadan la’a dahay in la kufsada, dareenkii iyo garashadeedii ayaa isku dhexyaacay, caafimaadkeedi waxbaa u dhinmay.
Waxay noqotay gabdhii qof maryaha uun iska xiran, waxba kama duwana sanamyada dharka la surto ee dukaamada ayaal, qolofkeeda ayaa nool se qalbigeeda wuu dhintay. Nolosha iyo geerida waa is kugu mid.
W/Q Nimco Noor´
Posted by Nimco Noor at 03:13 No comments:
ILLINTII QARSOONEYD Q:2AAD
Boqran waxay is weydiineysey
"Maxaa ku keenay halkaan?
Meeyey gaarigii aad saarnayd?
Dadkii kula socday halkey tageen?
Malaha waa la qashay oo adiga ayaa ka nool?
Yaa wax ii sheega!" Sidaas ayey ku muusanowday.
Dhulku waa madow wax iftiimayaa aysan jirin. Dabkii ay wax ku karsanayeen wey bakhtiiyeen, cirka iyo dhulka waxay ku kala garanaysaa dhowr xiddigood oo u muuqda, waa gudcur dam ah.
Ka baxso oo intey hurdaan ka carar, dhuumo ayey isku guubaabisey.
Kor markey u hinqatay oo hal talaabo qaaday ayey lugta la gashay aargalaankii ay galabta ciirta ka cabtay oo weli meeshiisii yaal. Qalalam!!
Waxaa halmar is la boodey habartii iyo Kamaal oo qori Ak47 ah agyaal. Qorigii ayuu la booday oo toosh dhamays ah wah indhaha kaga siiyey
Boqran, qeylo iyo gacmaha in ay kor u taagto ayey isku dartay oo ku dhawaaqday
”kaadi baa i haysa!
Kaadi baa i haysa, in aan soo kaadsho ayaan rabaaa, wax kale umaan soo kicin!”
Habartii oo soo salashay ayaa nacallad iyo habaar kala kor dhacday. “bax halkaas fariiso oo ku kaadi, mar dambe hurdada hanaga nixin!” ayey ku tiri
Habeenkii oo dhan Boqran waxay kuududey jawaankii ay habartu u gogoshay markii ay ka soo qaaday bacaadka. Illaa markaas wax war iyo wacaal ah kama aysan hayn sababta ay meesha u timid, welina ma aysan weydiin cidda halkan keentay iyo macnaha ay u joogto?
Maskaxdeeda waxaa ku jira saskii ay ka qaaday habarta wajigeeda iyo meesha baas ee ay taal.
Waaga baasi dheeraa!
Kulaylka iyo ciidda ay dhex jiifto, jirkeeda aan waayadan qubeysan iyo timihii oo ay uga shakinayso in ay injir ku dhalatay ayaa cuncun iyo huur is biirsaday ku haya.
Intaas waxaa uga sii daran cabsida haysa.
Waa naf daashey oo rajobeel ah, waa ay gataatidhacday.
Waxay ku soo kacday hadal iyo sheeko ay is waraysanayaan habartii iyo wiilkeeda Kamaal ah.
Duqdu waxay leedahay “Caaliya waxay rabtaa in ay adoontaan shaqaalle u noqoto oo iyada ay raacdo, annagana waxaannu u baahanahay lacag yar oo haddan ka gadanno Cali wuxuu na siinayaa xoogaa lacag ah. Maxaan yeelnaa wiilkeygiyoow? Bal talo keen.”
Kamaal waa nin baryar oo wagdoleh, waa da’ dhexaad aan aad u weyneyn una dhallinyarayn, madaxiisa timihii wey ka sii durkeen oo bidaar ayaa foolka ku soo haysa, isaga iyo habarta hooyadiis ah wey isku waji egyihiin, balse duqdaa ka dheereyd oo ka itaalroon.
Waa nin danyar ah lacagta ayaa isaga dan ugu jirtaa in uu tubaakadiisa ku soo gato.
Salka dhulka uma oollin, ee sidii odayaasha reer miyiga ah ayuu kadaloobey, qorigii uu watayna dhulkuu ku mudey si uu u cuskado.
“Hooyo Caaliya iyada ha shaqaysato, adoontaan waa mid itaal yar ceelka biyo oo ga ma keeni karto beertan uma fali karto, in aan is dhaafinno ayaa la qaatay.
Sow sidaas sax kula ma ahan?” ayuu hooyadiis su’aalay
Boqran waxaas oo dood ah dhegeheeda ayey ku maqleysaa.
Xaggeeda ayuu soo fiirshay mise ishey ku guluc siisay. "Magacaa?” ayuu weydiiyey.
Boqran magaceeda waxbarashada iyo dukumiintiyada ugu qoran waa Shukri, balse reerkooda oo aad u jeclaa qaymo weyna ay ku dhexlahayd hooyadeed ayaa ula baxday Boqran "Shukri” ayey ugu jawaabtay
“Shukria?” ayuu ku celiyey.
"Nacam” ayey tiri.
Kamaal intuu qoslay ayuu yiri “ma adoontan madow ayaa gabadhayda la magaca ah?
Adduunoow magacaa ba'! “Yaa kuu bixiyey magaca?” Ayuu su’aalay
Waxay ugu jawaabtay “aabbahay ayaa ii bixiyey”
Wejiga ayuu candhuuf qurmuun uga tufay oo lacnaday iyada iyo aabbeheedba.
Boqran matag ayaa qabtay oo neeftii ayaa ku dhegtay, laakiin miyey awooddaa in ay muujiso dareenkeeda. Calyadiisa qurmuunka badnayd oo tubaakada iyo caday la’aanta isku darsatay in ay iska tirtirto kuma dhacdo.
Iyada oo wali barteedii yuururta, waxaa timid mid ka mid ah labadii gabdhood ee habartu dhashay oo buul u dhow midka habarteed habeenkii ku hoyatay.
“Hooyo maxay u jiiftaa adoontu?” ayey weydiisey hooyadeed.
Habartii ayaa u sheegtay in Kamaal goor dhow uu kaxayn doono oo Cali laga soo iibindoono haddii uu ka gadanayo maadama ay tahay mid laf yar oo aan xoog badan lahayn.
“Hooyo Caaliya ayaa rabtee ha ka gadin” ayey ku qalqaalisay, balse habartii ayaa tir
“Caaliya waxaa u fiican kuwa xoogga waawayn ee ka yimaada Afrikadaas kale, tani waa kuwii lafaha yaryaraa waxba kama faa’iideyso.
Cali in uu naga ogolaado in uu naga iibsado ayaan Eebbe ka rajaynayaa”
Habartii ayaa ku duceysatay.
Boqran Rabbi ayey ku mahadisay mar haddii aan la qalanaynin oo adoonnimo loo gadanayo. Waxay naawileysaa in maalin maalmaha ka mid ah ay ka bixi doonto adoonnimada, hadday nooshahay.
Habartii ayaa u soo bixisay maro gaduudan oo aad u culus, kaddibna tii shalay u xirnayd inta meel ka soo qaaday ayey tustay qaabka ay wajiga ugu duuban lahayd.
Boqran waa ay garatay in ay tahay maradii ay habaaska ka xiran lahayd inta ay safarka yihiin, maaddama suuqii iibka loo wado si loo soo iibiyo.
Habartiina halkaas bay gacmaha cirka u taageysey iyada oo ku Alle baryeysey in middaan hiliftaa laga iibsado marka suuqa la geeyo, oo Cali uusan ku diidin.
Boqran intii aan la ambabixin ayey weydiisey “aaway alaabtaydii?”
Habartii oo guryamaysa ayaa ku tiri “soco alaabna kuuma haynee”
Boqran waxay ku muusanawday “Alla sawiradii reerkeenna iyo daawooyinkii uun haddaan helo waan kuu duceynayaa”
Habartii ayaa ku tiri wiilkeeda “sug bal! Wax fiican bay sheegtay’e. Naa ma daawooyin ayaad wadatay?
Soo baxsha boorsadii.
Gabadheedii Caaliya oo ka caraysan go’aanka habarta iyo Kamaal ay gaareen in laga iibiyo adoonta ayaa tiri “waa tan ee hoo sii xaqeeda” balse habartu danteeda maahan in ay siiso ee waxay rabtaa in ay u kala sheegto si ay u isticmaalaan, maaddama saxarahaan ay deggen yihiin wax isbitaal ah uusan u dhaweyn oo dawo sida ay ku helaan adagtahay.
Boqran oo faraxsan ayaa boorsadii gacanta ku qabsatay oo u hollatay in ay dhaqaaqdo.
Habartii oo aad moodo in hanti iyada ay tacbatay laga qaatay ayaa qaylo iyo cannaan afka furatay
“Yaa xawayaana, xaggeed u qaadanaysaa dawada?
Hadda waa in aad sheegto maxaad u cuneysey?
Ma tii xummadda ayaad wadataa? Waan ogahay oo Soomalidiina dawo fiican ayaad sidataan markaad Liibiya imaanaysaan. Kaalay oo hadda ii kala sheeg dawada” ayey ku amartay.
W/Q. Nimco Noor
Posted by Nimco Noor at 04:15 2 comments: